Sida Loo Dhaqaajiyo Wakhtiga Showtime Wakhti kasta (Showtimeanytime.com/activate) - Sida Loo
Waqtiga Showtime kasta waa barnaamij kabadal ama dayax gacmeed, iyo xitaa macaamiisha tooska u isticmaalaya waxay u isticmaali karaan inay si toos ah ugu soo bandhigaan Showtime si bilaash ah guriga ama meel kasta.
Waqtiga Showtime Marwalba asal ahaan waa adeeg bixiya deg deg deg deg ah oo loogu talagalay xilliyo ganacsi oo bilaash ah oo abaalmarin ah oo lagu abaalmariyo Showtime Original Series, filimaan la garaacay, isboorti, takhasus gaar ah, iyo waxyaabo badan oo dheeri ah, oo lagu daray waxaad daawan kartaa waxa hada si toos ah uga socda Showtime. Ka daawo markasta iyo meel kasta oo aad rabto, qalab kasta oo aad taageerto intaad ku sugan tahay Mareykanka
Wakhtiga-Bandhigga waa la heli karaa iyada oo lacag la'aan ah iyada oo qayb ka ah rukunkaaga Showtime ee jira.
Wakhtiga-Showtime Waqti kasta ayaa laga heli karaa heerar kala duwan oo halkaas ka baxsan. Hagaag, haddii aad horey u haysatay xubinimada Showtime markaa waa gebi ahaanba bilaash in laga caawiyo xubinnimada Showtime. Marka, ma jiraan wax kharash dheeraad ah oo loogu talagalay Wakhtiga Showtime Wakhti kasta.
Waqtiga Showtime kasta waa mid ka mid ah adeegyada la bixiyo, markaa waa inaan wax ka iibsanno si aan ugu isticmaalno adeegga aaladahayaga. Wakhtiga-Showtime Wakhti kasta ayaa loo heli karaa sahaminta sidoo kale si gaar ah gudaha Maraykanka.Macaamiisha TV Box waxay dhaqaajin karaan Waqtiga Showtime kasta oo kaliya iyagoo ku booqanaya goobta Smart TV-ga. Waxay bixisaa wax badan oo ka mid ah qabanqaabada TV gaar ah.
Uma baahnid inaad culeys saartid haddii aadan xubin ka ahayn inkasta, Showtime Waqti kasta waxay bixisaa horudhac bilaash ah waqtiga bandhigga waqti kasta.com/activate.Si fudud u isticmaal Waqtiga Bandhigga wakhti kasta oo bilaw daawashada madadaalo aan dhammaad lahayn. Haddii aad horey u soo gashay adeeg bixiye TV oo kaqeyb galaya, ka dib markaa si fudud u raac talaabooyinka Wakhtiga Showtime Wakhti kasta si aad isla markiiba u shaqeyso.
Sidee Loo Helaa Tijaabinta Fiidiyowga Fiidiyowga Fiidiyowga ah?
Talaabooyinka Lagu Kicinayo Waqtiga-Showga Markasta Roku:
Geedi socodka si aad uga shaqeyso Wakhtiga Bandhigga Markasta Roku -
Marka hore, hubi in Roku-gaagu gebi ahaanba firfircoon yahay.
Halkaa marka ay marayso, hubi qabanqaabiyahaaga shabakadda.
Marka xigta, waxaad u baahan tahay inaad sameyso waa, tag boggaaga https://www.roku.com/ xiriiri, gal rekoorkaaga, oo aad tagista Roku kanaalka dukaankiisa.
Intaa ka dib, waa inaad aadaa showtimeanytime.com/activate oo uu adeegsado shabakad internet.
Markaad halkaa marayso, si fudud u guji 'ku dar kanaalka' oo dhaqaajiso kanaalka Showtime Anytime.
Daar Roku-gaaga oo sahamso shaashadda 'Guriga'.
Kadib, u gudub Settings> Beddelka qaabdhismeedka> Cusboonaysiinta Nidaamka> Hubi Hadda.
Waqtigan xaadirka ah, aad dukaanka kanaalka oo soo bandhig kanaalka Showtime Anytime.
Guji kanaalka kujira.
Waad arki kartaa, hadda showtimeanytime.com/activate kanaalka waa laga heli karaa liiska kanaalkaaga Roku.
Waa inaad dirtaa kanaalka Showtime wakhti kasta si aad dib uguhesho koodhkaaga kanaalka.
Tag kombuyutarkaaga, qor waqtiga bandhiga wakhti kasta.com/activate.
Hada guji badalka Diiwaangelinta Roku.
Geli nambarkaaga Wakhtiga Muujinta wakhti kasta.
Hadda Xulo badhanka Add.
Dhowr daqiiqadood ka dib, Roku-gaagu si dabiici ah ayuu u raaxeysan doonaa waxaadna diyaar u tahay inaad daawato showtimeanytime.com/activate.
Talaabooyinka lagu dhaqaajinayo Wakhtiga Showga wakhti kasta ee TV-gaaga Apple:
Waa kuwan tallaabooyinka ku saabsan sida loo kiciyo Waqtiga Showtime wakhti kasta ee TV-ga Apple:
Marka hore, ka fur barnaamijka Showtime Apple TV-gaaga.
Hadda, ka fur barnaamij kasta kanaalka Showtime ka dibna dooro badhanka Play.
Hadda, ka xulo bixiyahaaga TV-ga liiska bixiyeyaasha.
Maskaxda ku hay, Halkan, waxaa lagaa codsan karaa inaad gasho koontadaada Showtime si aad u xaqiijiso rukunkaaga.
Xulashada kadib, koodh hawlgal ayaa lagusoo bandhigi doonaa Apple TV-gaaga. Marka, qor.
Hadda waxa aad u baahan tahay inaad sameyso ayaa ah, ka fur www.showtimeanytime.com/activate shabakadda internetka kombiyuutarkaaga, kiniinigaaga, ama taleefankaaga.
Marka xigta, Haddii aadan si otomaatig ah u saxiixin, dhagsii badhanka galitaanka ka dibna isticmaal magaca isticmaalaha iyo erayga sirta ah ee ay bixiso adeeg bixiyaha si aad ugu gasho koontadaada.
Hadda waxaad u baahan tahay inaad geliso lambarkaaga hawlgelinta sanduuqa koodhka waxqabadka ee maran.
Oo mar haddii lambarka dardargelinta ee ka socda Apple TV la xaqiijiyo, farriin ayaa ka muuqan doonta shaashadda.
Hadda, waxaad bilaabi kartaa inaad daawato taxanahaaga Showtime ee aad ugu jeceshahay iyo filimada Showtime oo aad la socoto Wakhtiga Wakhtiga oo aad ku jirto TV-gaaga Apple TV.
Talaabooyinka lagu dhaqaajinayo Wakhtiga Showtime wakhti kasta ee barnaamijkaaga Xbox One:
Showtime sidoo kale wuxuu ku degay Xbox One. Waa kuwan tallaabooyinka ku saabsan sida loo kiciyo Waqtiga Showtime wakhti kasta oo Xbox One ah oo daawan helitaanka aan xadidnayn ee Showtime's showyada iyo filimada wakhti kasta oo aad rabto:
Ku fur barnaamijka Showtime barnaamijkaaga Xbox One.
Marka xigta, iskuday inaad ku ciyaarid barnaamij kasta kanaalka Showtime Anytime.
Hadda, ka xulo liistada TV-gaaga.
Ka dib markaad doorato bixiyaha, koodh hawlgal ayaa lagu soo bandhigi doonaa shaashaddaada Xbox One. Hoos u fiirso.
Hadda, ka fur www.showtimeanytime.com/activate shabakadda shabakadda kombiyuutarkaaga, kiniinigaaga, ama taleefankaaga casriga ah.
Talaabada xigta waa, dhagsii badhanka LOGIN ka dibna isticmaal magaca isticmaalaha iyo erayga sirta ah ee uu bixiyo adeeg bixiyaha si aad ugu gasho koontadaada.
Si fudud u raac tilmaamaha ka dibna geli lambarka hawlgelinta sanduuqa PIN ee waxqabadka.
Hadda mar koodhka waxqabadka ee Xbox One-kaaga la xaqiijiyo, farriin ayaa ka muuqan doonta shaashaddaada.
Hada, waxaad bilaabi kartaa inaad daawato taxanaha asalka ah iyo filimada aad jeceshahay ee leh Waqtiga Showtime ee Xbox One markasta ama meelkasta oo aad rabto.
Talaabooyinka lagu dhaqaajinayo Wakhtiga Showtime wakhti kasta oo ku saabsan Samsung Smart TV:
Nidaamka lagu dhaqaajinayo Wakhtiga Wakhtiga ee Samsung Smart TV waa wax fudud oo la mid ah barnaamijka 'ShowTime' ee wakhti kasta looga hawl galo Apple TV. Waa kuwan tallaabooyinka sida loo sameeyo:
Marka hore, ka fur barnaamijka Showtime Samsung TV-gaaga Smart-ka ah ka dibna isku day inaad ku ciyaarto barnaamij kasta oo ka socda kanaalka Showtime Anytime.
Marka xigta, ka xulo bixiyeha TV-ga ama bixiyaha adeegga qulqulka liiska.
Ka dib marka aad dhamayso xulashada bixiyaha, code hawshooda ah ayaa lagu soo bandhigi doonaa shaashadda Samsung Smart TV.
Hadda waxaad u baahan tahay inaad soo booqato http://www.showtimeanytime.com/activate ee shabakadda internetka ee kombiyuutarkaaga, kiniinigaaga ama taleefankaaga casriga ah.
Haddii ay dhacdo in si otomaatig ah aadan u galin, dhagsii ikhtiyaarka LOGIN, ka dibna waxaad isticmaali kartaa username iyo lambarka sirta ah ee ay bixiso adeeg bixiyaha si aad ugu gasho koontadaada.
Raac tilmaamaha ku yaal shaashadda ka dibna geli lambarka hawlgelinta sanduuqa koodhka waxqabadka ee maran.
Kadib koodhka hawlgelinta la xaqiijiyo, farriin ayaa ka soo muuqan doonta shaashadda TV-ga.
Mar alla markii aad tallaabooyinka oo dhan si guul leh u qabato, Waqtiga Showtime kasta waxaa lagu hawlgelin doonaa Samsung Smart TV waxaadna bilaabi kartaa daawashada wax kasta oo aad jeceshahay.
Talaabooyinka lagu dhaqaajinayo Wakhtiga Showtime wakhti kasta ee TV-gaaga Android:
Waa kuwan tallaabooyinka lagu dhaqaajinayo Wakhtiga-Showtime wakhti kasta ee TV-gaaga Android:
Ugu horreyntii, tag Google Play Store oo ku yaal TV-gaaga Android ka dibna si fudud u soo dejiso barnaamijka Showtime.
Talaabada xigta waa in la furo barnaamijka Showtime ee TV-gaaga Android ka dibna aad isku daydo inaad ku soo bandhigto bandhig ama filim kasta kanaalka Showtime Anytime.
Intaa ka dib, ka xulo liisaska TV-gaaga ama bixiyaha adeegga socodka.
Marka aad dhamayso xulashada bixiyaha, lambar hawlgal ayaa lagu soo bandhigi doonaa shaashadaada TV-ga Android.
Hadda waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso ayaa ah inaad tagto www.showtimeanytime.com/activate oo ah biraawsar shabakadda kombuyuutarkaaga ah, kiniinigaaga, ama taleefankaaga casriga ah.
Waxa xiga waa, dhagsii ikhtiyaarka LOGIN ka dibna isticmaal magaca isticmaalaha iyo erayga sirta ah ee ay bixiso adeeg bixiyaha si aad ugu gasho koontadaada.
Haddaba, raac tilmaamaha ku yaal shaashadda ka dibna geli lambarka hawlgelinta sanduuqa koodhka waxqabadka ee maran.
Marka koodhka waxqabadka la xaqiijiyo, fariin guul ah ayaa ka soo muuqan doonta shaashadda TV-ga.
Hadda, waxaad bilaabi kartaa inaad ka daawato wax kasta oo aad rabto barnaamijka Showtime ee ku saabsan taleefankaaga Android Tv.
Ku raaxayso Wakhtiga-Bandhigga Markasta oo aad ka heleyso barnaamijyo kala duwan:
Waxaad si fudud ugu isticmaali kartaa qalabka ay ka mid yihiin Amazon Fire TV, Apple TV, Android TV, Chromecast, LG TV, Roku, Samsung TV, Xbox One, iyo waxyaabo kaloo badan. Sidaa darteed, iyadoon loo eegin aaladda aad u isticmaalayso daawashada sawirrada dhaqdhaqaaqa iyo telefishanka, Wakhtiga-Showtime Wakhti kasta ayaa badanaa loo isticmaali karaa iyada oo aan wax arrimo ah jirin.
Waqti Showtime waa wakhti urur ka dhiga maktabadooda warbaahineed mid aad u weyn. Waxaad kaheli kartaa sawirro dhaqdhaqaaq aan tiradooda la tirin karin, TV-ga ayaa soo muuqda, bandhigyo heeso taagan, iyo si aad ah uga sii badan adeeg bixiyahan. Sidoo kale, waxa ugu fudud ee ku saabsan Waqtiga Showtime Markasta waa in walxahaani lagu heli karo yoolalka ugu sarreeya. Tani badanaa waa mid aad u qiimo badan maadaama aad uga faa'iideysan doontid barnaamijkan mid ka mid ah qalabkaaga adigoon ku adkeynin heerka. Intaa waxaa sii dheer, u adeegsiga codsigan daadinta waa mid si fudud u fudud sababtoo ah UI ee boggan. UI-kani wuxuu qalabka ka dhigayaa mid aad u muuqda maanta oo siman iyadoo si aan caadi ahayn u fudud in la isticmaalo.
Adeegyada Wakhtiga Wakhtiga la heli karo waxaa laga heli karaa:
SHO.com‌ ‌ (magacooda ‌ rasmiga ah‌ degelka) ‌ ‌etc.‌
Maaddaama adeeggan uu yahay mid xilligan la heli karo oo keliya Mareykanka. Isticmaalayaasheeda waa inay maanka ku hayaan in bogagga iyo kanaalada ay kaliya ku dari karaan qaaradda iyo meelaha ku xeeran oo keliya.
Waqtigan xaadirka ah, waa kuwan bixiyeyaasha kanaalka ee soo socda ee leh Waqtiga Showtime kasta oo ka socda qoyska Showtime -
Astaamaha Wakhtiga-Showtime Markasta:
Waad daawan kartaa waxa toos u soconaya labadaba, ha ahaato Showtime East iyo Showtime West, sidoo kale xitaa waad kala beddeli kartaa kanaalka iyadoo loo eegayo baahidaada.
Waxay kaa caawin doontaa kala soocida iyo aragtida mashaariicda aad doorbideyso Waqtiga Showtime.
Waxaad si fudud ugu soo dejisan kartaa filimada iyo muuqaalada aaladaha Smart TV Box ee aad doorbideyso oo aad daawan kartid goor dambe markaad khadka ka maqantahay.
Waxaad sidoo kale daawan kartaa bandhiga mar kale meesha aad kaga tagtay qalab kale.
Waad u adeegsan kartaa inaad ku daawato qalabkaaga aad dooratay sida Kiniinigaaga, Taleefankaaga, TV-gaaga, ama xitaa kombuyuutarkaaga.
Waxaan ku taxnay habka lagu dhaqaajinayo Waqtiga Showtime Waqti kasta oo kor ku xusan. Waxaan rajeyneynaa tusahan faahfaahsan iyo talaabo talaabo ah ee ku saabsan sida loo kiciyo Waqtiga Showtime wakhti kasta qalabkaaga adoo adeegsanaya Showtime anytime.com/activate ayaa kaa caawisay adiga oo kuu ogolaanaya inaad ku dhaqaajiso Waqtiga Showtime wakhti kasta taleefankaaga casriga ah.
VPN ugu fiican sanadka (2020)
Ka daawo Bandhigyada TV-ga khadka tooska ah
Waa maxay Guy Oseary's Net Worth iyo Mushaharka?
Ciyaaryahanka muusigga ee dugsiga ee dugsiga
sida aad u daawato online
watchmovies com filimada bilaashka ah ee internetka
daawo filimada bilaashka ah ee onlaynka ah wax soo degsasho ma jiro